SandP, लक्जरी टूर मा लेखक भारत-टूर परिचालक भुवनेश्वर - 91-993.702.7574
अभिलेख लेखक द्वारा:
लेखकको लागि अभिलेख:
तपाईको 2019 बाल्टी सूचीमा जानुहोस् Spooky Places लाई थप्नुहोस्
अज्ञात रहस्यको देशमा केहि स्पाइचिङ ठाउँहरू छन् जुन तपाईंको यात्रा कार्यक्रममा थप्न। धार्मिक प्रथाहरूबाट रत्नशील भारतीयहरू हुन् जुन यी विशेषताहरूले भारतलाई एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाएको छ। यसकारण, जब यो भारतको सबैभन्दा प्रेतवाधित स्थानहरू सूचीबद्ध हुन्छ, त्यहाँ सुरू गर्न राम्रो देश छैन। स्पोक स्थानहरू थप्नुहोस् [...]
यात्रा पछि जेट लेगबाट बच्न स्मार्ट तरिकाहरू
समय-क्षेत्रहरूमा यात्रा यात्रा गर्न कठिनाई हुन सक्छ। तपाईंले निद्रा गुमाउनु भयो, थकान अनुभव र लगातार सिरदर्द। के तपाईंले जेट-लगको बारेमा सुन्नुभयो? यदि तपाइँसँग छैन भने कुनै मुद्दा छैन, किनकि यो भर्खरै भर्खरैको अवधि हो। अधिकांश यात्रीहरूले आफ्नो सीमित समयको धेरै भन्दा बढी विदेश बनाउन प्रयास गर्छन्, अझै पनि समय मा छलांग राख्न [...]
शीर्ष5अनुभव तपाईं आफ्नो ओडिशा टूर मा हुनुपर्छ
कसरी लाइट प्याक गर्ने हो (लन्डर पढ्नुहोस्) एक लामो टूरका लागि
अन्तमा, तपाईं त्यो लामो यात्राको लागि त्यो यात्रा लिनु हुँदै हुनुहुन्छ तर तपाईं एक प्याकमा के गर्दै हुनुहुन्छ र कुन कुराको बारेमा सोच्नु हुन्छ। ठीक छ, राम्ररी प्याकेन गाह्रो छ र कहिलेकाँही धेरै प्रयास र सोच्नु आवश्यक छ तर यो पुरा तरिकाले लायक छ। तपाईंको सही प्याकिङ सूची तपाईंको निर्भर हुनेछ [...]
सोलो महिला यात्रा मिथक डेबिट
एक महिलाको रूपमा एक्लै यात्रा गर्दा सजिलो संभावना हुन सक्छ, तर यो सधैँ हुनु हुँदैन। कुनै पनि महिलाले सोलो यात्रामा लगाउँदा धेरै सल्लाह पाउनेछ, यसको धेरै अनौपचारिक, कष्टित गुण र एकल यात्राको खतराहरूको बारेमा। यात्रा गर्दा सँधै हजारौं संग एक ठूलो हिट भएको छ, एकल यात्रा [...]
त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा थाहा पाउनु पर्दछ
वास्तविक हो, के हामी? सोलो यात्रा गर्दा आफैलाई राम्रो फोटो खिच्न म सबै भन्दा चुनौतीपूर्ण कार्यहरू मध्ये एक छ, म भरिएको छु र म स्वयंसेजको बारेमा कुरा गरिरहनु भएको छैन, म तस्विरहरूको बारेमा कुरा गरिरहेको छु जुन तपाईले गरेका स्थानहरू प्रतिबिम्बित गर्दछ। स्वइज, बस मैले भेट्ने स्थानहरू ठिकाउँछु, हेक! तस्वीर पनि केहि पनि देखाउँदैन [...]
8 स्थानहरू भारतमा तपाईंको भारत यात्रामा रहनु पर्छ
भारत सकारात्मक भेब्स को एकता को प्रतिबिंबित गर्दछ। एक देश जहाँ तपाईं मैदानहरुमा कोहरे को अनुभव गर्न सक्छन्, समुद्र तट को नजिकै गर्म धूप, र जंगली वातावरणहरुमा रहस्यमय mists। यो रहस्यमय भूमिको अन्वेषण गर्नुहोस् जुन महिमा संग बीम हुन्छ। त्यहाँ भोलि भोलि भोलि लाइभ गर्नुहोस्। अनि आज तपाईले अन्वेषण गर्नुहुनेछ जुन तपाईं संग जीवनकाल समाप्त हुनेछ। यहाँ 8 छन् [...]
एक नेपाल टूरमा गर्न असामान्य कुराहरू
नेपालले शताब्दीको लागि भारतसँग यसको संस्कृति, इतिहास र सम्पदा साझेदारी गरेको छ। धेरै पर्यटकहरू राजधानी शहरमा भेला हुन्छन् र सम्पूर्ण देशको बारेमा उनीहरूको विचार बनाउँदछ। नेपालको अमूल्य कृतिको आदान-प्रदान जब हामी साँच्चै ठाउँको भ्रमण गर्ने निर्णय गर्छौं। देशको रूपमा डेलिभिजनको सट्टा [...]
बच्चाहरु संग एक छुट्टियों को यात्रा कसरि बचें
संसारको सबैभन्दा रोमाञ्चक प्राकृतिक वातावरण उत्तम साहसिक खेल मैदानहरूको लागि बनाउँछ। अवकाशको मौसममा जवान छोराछोरीको आमाबाबु हुनु भनेको धेरै व्यस्त हो - कहिलेकाहीँ अराजकता-दिनहरू। यो साल को एक अद्भुत समय हुनु हुँदैन, तनावपूर्ण छैन। परिवार विभिन्न आकृतिहरू, साइजहरू र बजेटहरूमा आउँछन् र हामी सबैलाई पूरा गर्दछौं [...]
बजेटमा थाइल्याण्ड भ्रमण
कसलाई विदेशी गन्तव्यको यात्रा गर्न चाहँदैन? तर हामीलाई के गर्ने गर्दछ? यदि तपाई सोच्नुहुन्छ कि यात्रालाई अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा तपाइँको जेबमा छेद जलाउन सक्छ, तपाईले सही स्थानमा आउन सक्नुहुन्छ। तपाईं जरूरी अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा यात्रा गर्न धेरै पैसा खर्च गर्न आवश्यक छैन, र एक [...]